सूचना-प्रविधि – Pahilo Page
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नेशनल आईसिटी डे २०७९ को अवसरमा विभिन्न अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । बैशाख १९ गते मनाइने चौथो राष्ट्रिय सुचना तथा प्रविधि दिवसको अवसरमा टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि अनलिमिटेड डाटा र भ्वाइससहितको कम्बो प्याक, डाटा प्याक र बोनस अन रिचार्ज उपलब्ध गराउने भएको हो । बैशाख १८ देखि बैशाख २४ सम्म उपल...
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सबै सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा असीमित कुराकानी गर्न मिल्ने अल टाइम अल नेट भ्वाइस प्याकसहितको स्प्रिङ अफर आज (२०७९ वैशाख ५ गते) देखि उपलब्ध गराएको छ । टेलिकमले ५९९ देखि १४९९ सम्मका सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड र प्रिपेड प्याकहरु समावेश गरेको छ । अबदेखि रु. ९९९ र रु. १४९९ का प्याकमार्फत कम्पनीभित्रको ...
काठमाडौं । नयाँ स्मार्टफोन खरिद गर्दाको बखत धेरैजसोले वाई-फाईको विषयमा ध्यान दिइरहेका हुँदैनन् । जब कि वाई-फाई फोनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । हुन त वाई-फाई अनेक प्रकारको हुने गर्दछ भन्ने कुरा सायद थोरैलाई मात्र थाहा होला । जसले तपाईँको फोन तथा इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा सिधा सम्बन्ध राख्छ । यसको अर्थ यदि तप...
साओमीले आफ्नो फ्ल्याग्शिप फोन साओमी १२ र साओमी १२ एक्स नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । प्रयोगकर्ताहरुलाई कटिङ एज भिडियोग्राफ्री र इन्टरटेन्मेन्ट पावरहाउसको अनुभव दिने उद्देश्यले अत्याधुनिक एल्गोरिदम, फ्ल्यागशिप प्रोसेसिङ पावरसहित यी फोन बजारमा ल्याइएको हो । यी दुई फोनमा १३ एमपी अल्ट्रा-वाइड एंगल क्यामेरा रहेको छ । दुबै...
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्ष २०७९ लाई लक्षित गर्दै ग्राहक योजना सार्वजनिक गरेको छ । टेलिकमले अनलिमिटेड डेटा र भ्वाइस प्याकसहितको नयाँ वर्ष योजना उपलब्ध गराएको हो । यो अफर भोलि अर्थात् चैत २९ गतेदेखि बैशाख ३ गतेसम्म उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो अफर अन्तर्गत २...
काठमाडौं । सामान्यतया हामीले कुकिज अथवा बिस्कुटलाई आतिथ्यता अथवा खाजाको रुपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ । तर त्यस्ता केही कम्प्युटर फाइलहरूलाई पनि कुकिज नै भनिन्छ, जुन तपाईँको जीवनमा निकै महत्त्व राख्दछन् । कम्प्युटरमा रहेको साधारण ‘टेक्स्ट फाइल’ कुकिजको आधारभूत भर्सन हो । जब तपाईँ कुकिज प्रयोग गर्ने वेबसाइट भिजिट गर्...
काठमाडौं । अहिले सामाजिक सञ्जाल तथा भिडिओ शेयरिङ एपको प्रयोग व्यापक बढेको छ । मानिसहरू आ-आफ्नै प्रयोजनले सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा परिचित हुन वा हाम्रा कन्टेन्ट (फोटो, भिडिओ वा अन्य सामग्री) सबैसामु पुर्‍याउन धेरै फलोअर वा साथीको आवश्यकता पर्छ । आज हामी टिकटकमा आफ्नो फलोअर कसरी बढाउने भन...
यस्ता छन् खतरनाक स्मार्टफोन, जसले छोड्छन् हानिकारक रेडिएसन
काठमाडौं । यसो भन्दा गलत हुनेछैन कि फोनले हानिकारक रेडिएसन उत्सर्जन गर्दछन् । तर मोटोरोला, वनप्लस र गुगल पिक्सेलका केही पुराना फोन यो मामिलामा सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । ब्याङ्कलेस टाइम्समा आएको एउटा नयाँ रिपोर्टका अनुसार मोटोरोला एज, वनप्लस सिक्स टी, सोनी पिक्सेल, पुराना गुगल पिक्सेल मोडेल समेत स्मार्टफोन सबैभन्द...
५० मेगापिक्सेल सेल्फी क्यामेरा भएको भिभो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा, कति होला मूल्य ?
काठमाडौं । भिभोले नेपाली बजारमा आफ्नो तीनवटा स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । ‘भी’ सिरिजको एउटा (भी २३ फाइभजी) र वाई सिरिजको दुईवटा (वाई ३३ एस र वाई जिरो वन) स्मार्टफोन नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएका हुन् । सार्वजनिक भएका तीन स्मार्टफोन मध्ये भी २३ फाइभजीमा ६४ मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा सहित फ्रन्टमा ५० मेगापिक्सेलको ...
मोबाइलमा यी एप छन् भने तुरून्तै हटाउनुहोस्
काठमाडौं । गुगलले आफ्नो प्ले स्टोरबाट एक दर्जनभन्दा बढी एप हटाएको छ । प्रयाेगकर्ताको ठेगाना, फोन नम्बर, ईमेल ठेगाना लगायतका जानकारी गोप्य रुपमा पत्ता लगाउने एप हटाइएकाे हाे । यसअन्तर्गत क्यूआर कोड स्क्यानर, मौसमी जानकारी दिने एप, मुस्लिमको प्रार्थना गर्ने एप लगायत छन् । रिपाेर्ट अनुसार केही एप एक कराेडभन्दा बढी पटक ...